Shiinaha HFD Soo Saarista Froth Horizontal (Repalce AHF) soosaarayaasha iyo alaableyda | bame damei kingmech
Awoodda: 0-3151m3 / h
Materail: CR27, Cr28, CD4MCu, safka caaga
HFD slurry pump waa bamka slurry wasakhda ah ee culus oo culus oo culus. dalabkeedu wuxuu ku shubayaa slurry xumbo adag. oo ah qalab farsameysan oo qaab-soocid khafiif ah u xalliya dhibaatadan si fudud.
Qaado tiro yar, waxtar sare.
Qalab xumbo gaar ah leh cabbirka weyn ee soo galida, faa iidadan ay u leedahay culeysyada waaweyn ee waaweyn ayaa yimid Farqi ayaa u dhexeeya bamgareynta wasakhda wasakhaysan iyo wasakhda caadiga ah.
Dhibaatada wax ka qabashada xummada ee qaar ka mid ah wareegyada nidaamka ayaa noqon kara mid aad u jahwareersan. Xiiqdu badanaa waxay hawada ku xirtaa bamka caadiga ah. Qalabaynta biyo-xireenka qalajiyaha ayaa xallinaya dhibaatadan. Natiijadu aad ayey uga yartahay kor u kaca, xulashada bamka yar, iyo waxtarka sare
Faa'iido dheeri ah oo ah naqshadeynta xumbo-biyoodka iyo gelitaanka weyn ayaa ah inay sare u qaadeyso xaddidnaanta xoojinta adag ee mashiinka sanduuqa dhexe uu xamili karo. Maaddaama dhibaatada ugu weyn ee wax ka qabashada xummaddu ay la mid tahay ta wax ka qabashada qulqulka dareeraha ah, helitaanka qulqulka bamka si loo bamgareeyo, matoorkan ayaa la caddeeyay inuu yahay mid waxqabad sare ka sameeya qulqulatooyinka warbaahinta ee cufan. Dhibaatooyinka sii kordhaya ee qulqulka ee caadiga ah ee naqshadaha kale ee mashiinka qulqulka ee socodka hooseeya ayaa lagu tirtiraa qulqulka qulqulka. Warshadaha macdanta ayaa tusaale u ah hawlgal ay hareeyeen xumbo iyo dhibaatooyin u nugul. Xoreynta macdanta laga helo macdanta, waxaa badanaa lagu faafiyaa iyadoo la adeegsanayo wakiillada sabeynta adag. Xumbooyin adag ayaa qaada naxaasta, molybdenum ama dabo bir ah si loo soo kabsado loona sii shaqeeyo. Xumbooyinkan adagi waxay abuuraan carqalad leh bambooyin qulqulaya oo caadi ahaan badanaa keena xulashada bambooyin aad u waaweyn oo aan waxtar lahayn. Mashiinka Froth waa cabirro yar yar oo waxtar badan. Kiciyeyaasha wax soo saaraha iyo dariiqa weyn ayaa si hufan u xaqiijinaya wasakhda ama wasakhda dareerayaasha ah inay gasho mashiinka oo u oggolaanaya mashiinka inuu u daabulo halka loo socdo. user saaxiibtinimo.
Wuxuu ku dhashay bamka xummada xalliya labada dhibaato ee macdanta: xumbo, dareerayaal naftiisu ku badan tahay
Bamkaan waxaa si weyn loogu isticmaali karaa macdanta naxaasta, macdanta alumina, macdanta.
Hore: HADPP Shaqo Culus oo Xakamaynta Mashiinka Xaraashka ah ee Taxanaha ah (Dib u celi AHPP)
Xiga: HSD saarida culus ee qasabka ah (Repalce XU)
WAD Tabar-darrida Wax-soo-saarka Daran ee Soodhawrka ah (Repalce L / M)
API610 BB1 (SHD / DSH) saar
Bam-badeedka 'SSD Submersible Pump'